यी हुन मध्यकमाण्ड इञ्चार्ज सुदर्शनसँगै गिरफ्तार परेका ८ नेता कार्यकर्ता, के भन्छ प्रहरी ? — Sanchar Kendra
यी हुन मध्यकमाण्ड इञ्चार्ज सुदर्शनसँगै गिरफ्तार परेका ८ नेता कार्यकर्ता, के भन्छ प्रहरी ?
काठमाडौं । प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका मध्यकमान्ड इञ्चार्ज हेमन्तप्रकाश ओली सुदर्शनसहित ९ नेता–कार्यकर्तालाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ ।
त्यसअघि नेकपा पोलिटब्युरो सदस्य मोहन कार्की ‘जीवन्त’ ललितपुरबाट गिरफ्तार परेका थिए । नेकपाले जीवन्तसहित गिरफ्तार गरिएका सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्ताहरूको रिहाइको माग गरेकाे छन् । सरकारले गिरफ्तार गरिएहरूलाई तुरुन्त रिहा नगरेमा कुनै पनि जनप्रतिरोधको कारबाही अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी नेकपाले दिएको छ।
बिगतदेखि नै ओली सरकार नेकपमाथि व्यापक दमन गर्दै आएको छ । प्रतिबन्धपछि नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरुलाई जहाँ भेट्यो त्यहि समात्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।